Waxqabadka qayb ahaan: liistada qaybaha ka faa'iideysanaya wax ka beddelka sicirka
Waxqabadka qayb ahaan: magdhow
Hawlaha qayb ahaan, waxaad shaqaalaha siineysaa magdhow saacadle ah oo u dhiganta 70% mushaharkooda guud. Laga soo bilaabo Janaayo 1, 2021, mushaarka tixraaca ee loo adeegsado xisaabinta kaalmada wuxuu ku egyahay 4,5 mushaharka ugu yar.
Ilaa cabirka dib loo dhigo, heerka kaalmada waxqabadka qayb ahaan waxay ka kici doontaa 70 ilaa 60% laga bilaabo Febraayo 1, 2021 kiisaska guud.
Waxaad ka faa'iideysaneysaa gunnada sicirka ee guriga oo ay wada maalgeliyaan Gobolka iyo UNEDIC. Mabda 'ahaan, saacadda saacadda ee waxqabadka qayb ahaan waxaa loo qoondeeyay 60% ee mushaharka guud ee saacadlaha ah ee shaqaalaha ay khusayso xaddiga 4,5 ugu badnaan mushaharka saacaddii. Heerkan ayaa la filayaa inuu u kaco illaa 36% laga bilaabo Febraayo 1, 2021.
Laakiin waxay kuxirantahay qeybtaada waxqabad, waxaad ka faa'iideysan kartaa heerka caymiska oo kordhay.
Tani waxay khuseysaa qeybaha ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa dhaqaale ee cudurka 'Covid-19', gaar ahaan sababta oo ah waxay ku tiirsan yihiin soo dhaweynta dadweynaha.
Dalxiiska, hudheellada iyo qaybaha cuntada ayaa ka faa'iideysanaya wax ka beddelka heerka gunnada waxqabadka qayb ahaan laakiin iyagu ma aha kuwa keliya. Liiskan ayaa markale la kordhiyay.
Waxaan hadda kala saari karnaa xaalado dhowr ah ...
Waxqabadka qayb ahaan: liistada qaybaha ka faa'iideysanaya wax ka beddelka sicirka July 10th, 2021Tranquillus
READ Korodhka tooska ah ee mushaharka ugu yar 2,65% Maajo 1
horeDadka nugul: taageerada waxqabadka qayb ahaan
socdaKaalmada waxqabadka qayb ahaan: waajibaadka cusub ee shirkadaha qaarkood ee ka faa'iideysanaya kororka heerka
06| Qaabkee lagu aasaasay CRPE?
Loo shaqeeyahaygu wuxuu igu qasbay inaan shaqeeyo intaan shaqola'aanta ahay: maxaa la sameeyaa?